Taariikhda Matryoshka, caruusadda Ruushka | Safarka Absolut
Isabella | | la fahmay
Haddii aan isweydiinno waa maxay xusuusta ugu caansan ee aan ku qaadan karno dalkeenna safar ka dib Ruushka, hubaal inteena badan ayaan uga jawaabeynaa si shaki la'aan ah xusuusta ugu fiican waa matrioshka.
Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan adduunka, oo aad si fudud u aqoonsan doontid xitaa haddii aadan waligaa horay u soo booqan Ruushka. Xaqiiqdii, warkoodu waa sida in matrioshkas ay xitaa noqdeen astaan ​​qurxin iyo moodel. Waxaa intaa dheer, xitaa waxaad ku yeelan kartaa matrioshka guriga oo ma xasuusatid meeshii aad ka heshay.
Matrioshkasku waxay leeyihiin asal xiiso leh iyo sidoo kale macno weyn ayey u leeyihiin dadka Ruushka ah markay hadiyado ugu helaan. Haddii aad had iyo jeer isweydiiso waxa ay tahay tooyigan taariikhdiisu, magaca uu ka yimid iyo waxa uu matalayo, ma seegi kartid maqaalkan aan kaga hadli doono dhammaan su'aalahan.
1 Waa maxay matrioshkas?
2 Maxay matalaan matrioshkas?
3 Sidee loo sameeyaa matrioshkas?
4 Halkee ayuu ka yimaadaa magaca matrioshka?
5 Waa maxay astaanta astaamaha?
6 Waa maxay taariikhda matrioshkas?
7 Matxafka Moscow Matryoshka
8 Sii matrioshka ah
Waa maxay matrioshkas?
Kuwani waa caruusado alwaax ah oo xajiya waxyaabo badan oo iyaga ka mid ah oo cabirro kala duwan leh.. Waxay kuxirantahay cabirka hooyada matrioshka, gudaha waxaan kaheli karnaa inta udhaxeysa ugu yaraan shan iyo ugu badnaan labaatan matrioshkas, mid walbana kayar kan hore. Cajiib!
Maxay matalaan matrioshkas?
Matrioshkas waxay matalaan haweenka reer ruushka waxayna astaan ​​dhaqan u yihiin wadanka.
Sidee loo sameeyaa matrioshkas?
Si loo sameeyo matrioshkas, dhirta ugu badan ee la isticmaalo waa kuwa ka yimaada alder, balsa ama bjchrk, in kasta oo ay u badan tahay in qoryaha ugu badan ee la isticmaalay ay yihiin linden.
Dhirta ayaa la jaray bishii Abriil, oo ah goorta ay dheecaanku ka buuxo badan yihiin, oo alwaaxyada ayaa hawada lagala baxayaa ugu yaraan laba sano, iyadoo lagu dhajinayo dhammaadka isku mid dheecaan ah si looga hortago in qorigu dillaaco
Markay diyaar noqdaan, nijaarradu waxay jaraan dhererka ku habboon waxayna u diraan aqoon isweydaarsiga si ay xaabada uga shaqeeyaan 15 marxaladood. Matrioshka ugu horeeya ee la sameeyay had iyo jeer waa kan ugu yar.
Halkee ayuu ka yimaadaa magaca matrioshka?
Magaca toy-gan wuxuu ka yimid «Matriona», oo ka mid ah kuwa ugu caansan Ruushka qadiimiga ah, kaas oo isna ka yimid Latin «mater» oo macnaheedu yahay hooyo. Markii dambe erayga "Matriona" waxaa loo waafajiyay matrioshka si loogu asteeyo caruusaddan. Ereyada kale ee sidoo kale loo isticmaalo tixraaca matrioshkas waa magacyo sida mamushka iyo babushka.
Waa maxay astaanta astaamaha?
Matrioshkas Ruushku waxay astaan ​​u yihiin bacriminta, hooyonimada iyo nolosha weligeed ah. Taasi waa, qoys ballaaran oo mideysan halkaasoo hooyadu ku dhasho gabar, tan dambe ee ayeeyadeed, iyadu ayeeyo u tahay iyo wixii la mid ah illaa ay mataleyso adduunka aan dhammaanayn.
Markii hore, kaliya caruusadaha dheddigga ayaa la xardhay, laakiin markii dambe raggooda ayaa sidoo kale dib loo abuuray si loo dhammaystiro qoyska isla markaana ay matalaan qiyamka kale sida walaaltinimada ka dhexeysa walaalaha. Waqtiga ka dib, matrioshka Ruushka ayaa sidoo kale la sameeyay oo matalaya shaqsiyaad taariikheed ama suugaaneed.
Waa maxay taariikhda matrioshkas?
Waxaa la sheegay in dhamaadkii qarnigii XNUMXaad ganacsade Ruush ah iyo ilaaliyaha Savva Mamontov ay safar ku aadeen Japan halkaas oo uu ku soo booqday carwo farshaxan oo uu ku bartay ka hor dhacii matrioshkas. Waxay ahayd matalaad toddobo ilaahyo oo midba midka kale ka dhex jiro oo ah Fukurokuju (ilaaha farxada iyo caqliga) kan ugu weyn iyo kan ay kujiraan ilaahyada kale.
Mamontov wuu ilaaliyay fikirka oo markuu ku laabtay Ruushka wuxuu u bandhigay ranjiyeha iyo leexleeyaha Sergei Maliutin si uu u sameeyo qayb u gaar ah qaybta Jabbaan. Sidan oo kale, doll ayaa loo abuuray oo matalaysa nin reer ruush ah oo faraxsan oo soo dhaweeyay dhammaan farcankeeda.
Toddobaadka ayaa dareen ku abuuray Carwadii Adduunka ee Paris ee 1900, halkaas oo ay ku sii qaadatay inay ku guuleysato billad naxaas ah, iyo warshado ayaa durba ka dillaacay Russia iyagoo soo saaray matrioshkas si loogu iibiyo guud ahaan dalka iyo galbeedka. Sidan oo kale waxay ku noqotay astaan ​​dhaqan Ruush iyo xusuusta ugu wakiilka ah waddanka. Farsamo-yaqaan kastaa wuxuu xardhaa caruusadaha u gaarka ah waxayna noqdeen caruusado qiime aad u qiimo badan leh maxaa yeelay mararka qaarkood waa alaab aruurin
Matxafka Moscow Matryoshka
Xaqiiqdii, aad ayey muhiim u yihiin in 2001 laga furay magaalada Moscow, Matxafka Matryoshka si loogu baahiyo taariikhda caruusadahaas iyo horumarkooda muddo kadib.
Matxafkani wuxuu soo bandhigayaa qaar ka mid ah asalkii ugu horreeyay asalka Ruushka ee la abuuray horraantii qarnigii XNUMX-aad iyo sida qaabkoodu u beddelay sannadihii la soo dhaafay.
Tusaale ahaan, 1920-meeyadii Bolshevik matrioshkas waxay matalayeen fasalka shaqada iyo xitaa sawirka "kulak" (erey loo adeegsaday si farxad leh oo loola jeedo beeraleyda hodanka ah) ayaa sidoo kale la soo saaray isagoo xiran koofiyad iyo gacmo laga gudbay caloosha weyn.
Intii lagu jiray xilligii USSR, dowladdu waxay rabtay inay ku muujiso caalamiga ah Soofiyeeti matrioshkas iyo jinsiyado kala duwan sida Belarusian, Yukreeniyaan, Ruush, iwm. Xitaa iyada oo lagu tartamayo booska, ururinta badan ee caruusadaha cirbixiyeenka sidoo kale waxaa lagu soo saaray dharkooda quusitaanka iyo gantaalka hawada sare.
Ka dib dhammaadkii USSR, mawduuca matrioshkas waxaa lagu kala matalay siyaasiyiin caan ah iyo kuwa caan ah oo caalami ah.
Qaadashada booqashada ururinta waa mid xiiso leh in la isbarbardhigo matrioshka ugu caansan iyo kuwa ugu casrisan. iyo sidoo kale jaantusyada Jabbaan ee dio Fukuruma oo iyaga dhiirrigelisay. Matxafku wuxuu kaloo muujiyaa farqiga u dhexeeya matryoshka oo ka kala yimid gobollada kala duwan ee Ruushka wuxuuna siinayaa macluumaad ku saabsan nolosha iyo xirfadaha hoggaamiyeyaasha farsamo yaqaannada matryoshka iyo rinjiyeyaasha.
Sii matrioshka ah
Dadka Rushka ah waxay u leedahay macno weyn inay siiso matryoshka hadiyad ahaan. Markuu qof hadiyad u helo mid ka mid ah caruusadahaas, waa inay furaan matrioshka ugu horreeya oo ay sameeyaan rabitaan. Marka la fuliyo, markaa waad furi kartaa caruusadda labaad oo aad sameyn kartaa rabitaan kale oo cusub. Sidaas ilaa illaa ugu dambayn iyo ugu yar ee matryoshka laga gaaro.
Mar alla markii matriyadaha oo dhan la wada furo, qof kasta oo hadiyaddan helay waa inuu u dhiibaa farac u ah astaan ​​ahaan inay ka duulayaan buulka. Markii hore tan waxaa sameeyay haween. Iyaga kaliya ayaa mas'uul ka ahaa guryaha waxayna sameyn karaan rabitaan ah inay ugu dambeyntii u gudbiyaan ilmahooda ilmahooda.
Taasi waa sababta haddii qof uu ku siiyo matrioshka, Waxaa lagu sheegay dhaqanka Ruushka inuu ku siinayo jacaylkiisa iyo kalgacalkiisa qaab toy ah.
Haddii, dhanka kale, adigu aad tahay kan ku siinaya matrioshka, marka lagu daro bixinta faahfaahintaan, waxa ugu wanaagsan ee aad sameyn karto waa inaad u sheegtaa qaataha macnaha iyo taariikhda hadiyadda hadda aad ogtahay. Sidan oo kale, isagu wuu qaddarin doonaa hadiyadda wax badan oo wuu ogaan doonaa waxa lagu sameeyo matryoshka ugu dambeeyay iyo kan ugu yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Taariikhda Matryoshka, caruusadda Ruushka
Aktarada Bollywoodka Ugu Fiican